धरानमा २ टाउको र ४ हातसहितको अनौठो बच्चा जन्मियो ! - Naya Patrika
धरानमा २ टाउको र ४ हातसहितको अनौठो बच्चा जन्मियो !
देवेन्द्र कार्की धरान, १३ पुस | पुष १३, २०७४
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिलाले चार हात, दुई टाउको भएको अनौठो शिशुलाई जन्म दिएकि छिन् । उनी गत मंगलबार स्त्री रोग तथा प्रतिष्ठानको प्रसूती विभागमा भर्ना भएकी थिईन ।
प्रसुति गराउँन असज भएपछि तत्कालै शल्यक्रिया गर्दा चार हात, दुइ टाउको र दुई खुट्टा भएको बच्चा निकालिएको थियो । अनौठो बच्चा जन्मिएपछि शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सक र नर्सहरुसमेत छक्क परेका थिए । बच्चा हेर्नेको भीड लागेको थियो ।
इनरुवा नगरपालिका ८ का चन्द्रनारायण मण्डल र सोनम मण्डल दम्पतीका छोरीका रुपमा शिशुको पेट र छाती टाँसिएको तर चार हात, दुइ टाउको, दुइ खुट्टा र एउटै यौनाङ्ग भएको शिशु जन्मेको प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले जानकारी दिए । नवजात शिशु स्वासप्रस्वासको समस्याले जन्मेको २४ घण्टापछि मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिए पछि मण्डल दम्पतीलाई बच्चाको स्वासप्रस्वासलाई सहज बनाउन मुखमा नली लगाउनु पर्छ भन्दा नलगाउने घर लाने भनेका थिए । पछि समस्या भएको चिकित्सकले जनाएका छन् ।